China HDPE yekutaurirana chubhu fekitori uye vagadziri | Shengyang
◎ Ngura kuramba uye hupenyu hwakareba hupenyu
Munzvimbo dzemahombekombe egungwa, pasi pevhu pakakwirira uye ivhu rakanyorova. Iko kushandiswa kwesimbi kana mamwe mapaipi kunofanirwa kuve anticorrosive, uye hupenyu hwebasa kazhinji unongova makore makumi matatu chete. Mapaipi ePE anogona kumira akasiyana emakemikari midhiya, uye haabatwe nevhu ngura.
◎ Kuoma kwakanaka uye kutsauka
Pe nyere ndeye yakakwira kuomarara pombi ine elongation pakuzorora kweanopfuura 500%. Iko kugona kuchinjika kune isina kukwana pasi pekugara uye dislocation yakasimba kwazvo. Yakanaka kuvhunduka kuramba. Mapepa madiki-anodzika anogona kukotama akasununguka.
Pipe Iyo pombi pamadziro inotsvedzerera, iyo yekukwesana coefficient idiki, tambo iri nyore kupfuura, iko kwekuvaka kugona kwakakwira, uye mutengo wekuvaka wakaderera.
◎ Kunaka kwemagetsi kuputira mashandiro, hupenyu hwakareba hwebasa (anopfuura makore makumi mashanu emapombi epasi pevhu), anogara kwenguva refu, uye akachengeteka uye akavimbika mutsara mashandiro
◎ Kurema kwechiedza, kugadzirisa, kuisa uye kuvaka, nyore kugadzirisa, kutakura kuri nyore uye mashandiro
◎ Pombi-diki-dzakapayirwa dzinogona kumoneredzwa, iine marefu mapaipi zvikamu, mashoma majoini, uye nyore kuiswa
◎ Mapaipi anogona kugadzirwa nemavara mazhinji kuratidza mutsauko
◎ Yakanaka kwazvo yakaderera tembiricha kukanganisa kusagadzikana
Iyo yakaderera-tembiricha yekumbundira tembiricha ye PE yakanyanya kuderera, uye inogona kushandiswa zvakaringana munzvimbo ye20-60C. Munguva yekuvaka munguva yechando, pombi haizopwanyika nekuda kwekukosha kwechinhu.
◎Kuramba kwakanaka kweabrasion. Inofananidzwa nemamwe mapaipi esimbi, PE pombi ine zvakapetwa ka4 kupfeka kuramba kupfuura pombi dzesimbi
◎ Nyore kubatanidza, inogona kushandisa nzira dzakasiyana siyana dzekuvaka
Pamusoro penzira dzechinyakare dzekuchera mapaipi eEP, akasiyana matekinoroji matsva asiri ekuchera anogona kushandiswa, senge pombi yekubaiwa, pombi dzepamberi, pombi dzakatsemuka, nezvimwe. Iyi ndiyo chete nzvimbo isingabvumirwe kuchera.
Yakasimbiswa Yakagadziridzwa Polyvinyl Chloride (MPVC-SR ...